UbuntuEd, ulwabiwo olutsha olusikhumbuza ngo-Edubuntu | Ubunlog
IPablinux | | Ulwabiwo olusekwe kubuntu, Edubuntu, Ubuntu
Kwakhona, kufuneka sikhumbule ukuba kuninzi ukuhanjiswa okusekwe kubuntu okuvela. Eyokuqala yamaza amatsha esithethe ngawo yayi ICinnamon yoBuntu, Kamva kwafika enye iprojekthi eyaziwa ngokuba UbuntuDDE (Ushicilelo lweDesktop ye-Deepin) kwaye kukwakho neendaba ezivela Ubuntu Lumina. Kutshanje sithethile malunga Ubuntu Ubunye, Abaphuhlisi babo bazise nje oko bakubizileyo UbuntuEd, usasazo olusikhumbuza ngomnye ukuba ngelo xesha yayiyincasa esemthethweni.
Umboniso wenziwa kwinethiwekhi yoluntu iTwitter kumsonto weetweets ezi-4 apho U-Edubuntu ukhankanyiwe. Ngapha koko, andazi ukuba ngethuba okanye hayi, iakhawunti esemthethweni ngu- @ed_ubuntu, enegama eliphantse lafana noluhlobo lwangaphambili lwemfundo yenkqubo yeCanonical. Abaphuhlisi bayo bathi ithatha indawo ye-Edubuntu kwaye usasazo luyilelwe ngemfundo yabantwana, yezikolo neyunivesithi. Inqaku layo elomeleleyo, okanye yintoni eyahlula UbuntuEd kwezinye i-distros, yisoftware eyifakileyo ngokungagqibekanga.
UbuntuEd okanye Ubuntu Imfundo: U-Edubuntu uyabuya
Ngexesha lokubhalwa kwale migca, bendingaqinisekanga ukuba leliphi igama eliza kusasazwa. Bayazikhuthaza njengoBuntu beMfundo, kodwa beka "UbuntuEd" kubazali. Kodwa ukuba sihlawula ingqalelo kwizinto abazithumileyo, kunye nemifanekiso ebandakanyiweyo, usasazo luya kubizwa ngokuba yi-UbuntuEd:
Ulwakhiwo lokuqala oluzinzileyo lwe-UbuntuEd 20.04 ngoku luyafumaneka. Olu luHlelo lweMfundo loBuntu lwabantwana, izikolo kunye neeyunivesithi, kwaye endaweni yencasa ye-Edubuntu (Ubuntu yeMfundo) eyekisiweyo ngoku. Khuphela kwi:
Isithuthi sikaGoogle: https://t.co/VhZ7aevnfK
(icandelo 1 kwe-4) pic.twitter.com/aSv91Qp5vs
-Imfundo yoBuntu (UbuntuEd) (@ed_ubuntu) Juni 30, 2020
Inguqulelo yokuqala ezinzileyo ye-UbuntuEd 20.04 ngoku iyafumaneka. Olu lupapasho lwezemfundo lwe-Ubuntu lwabantwana, izikolo kunye neeyunivesithi, kunye nokutshintsha i-Edubuntu.
Imeko engagungqiyo yemizobo eza kusetyenziswa ngu-UbuntuEd iya kuba ubunye, Kwaye siyakhumbula ukuba ngabaphuhlisi abafanayo abajongene neprojekthi yeUbuntu. Kodwa iya kubakho nge GNOME, kwidesktop enye esetyenziswa yinguqulelo ephambili. Ezi ndawo zimbini zifakwe ngokungagqibekanga kwaye unokukhetha enye okanye enye kwi-login.
Ukuba unomdla wokuzama UbuntuEd, unokukhuphela umfanekiso wakho wokuqala we-ISO kwiGoogle Drayivu yakho onokufikelela kuyo esi sixhobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ulwabiwo olusekwe kubuntu » Edubuntu » UbuntuEd, ulwabiwo olutsha olusikhumbuza uninzi lwe-Edubuntu ephelileyo
IFirefox 78 iza nethuba lokubuyisela iithebhu ezivaliweyo kunye nezinye iindaba